Iimpawu zesicatshulwa esibalisayo | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | | Inoveli
Kuncwadi, uyazi ukuba zininzi iindlela zokubhaliweyo. Enye yazo yingxelo, ekwayeyona isetyenziswa kakhulu ekhoyo. Kodwa, Zeziphi iimpawu zesicatshulwa esibalisayo?
Ukuba ubhala olu hlobo lwesicatshulwa kwaye ufuna ukulenza kakuhle, ngoko ke siza kuchaza ngokucokisekileyo kangangoko sinakho konke okufuneka uyazi malunga nesicatshulwa esibalisayo. Ziphose kuyo.
1 Yintoni isicatshulwa esibalisayo
2 Sisiphi isakhiwo esilandelayo
3 Iimpawu zesicatshulwa esibalisayo
3.2 Abalinganiswa yinxalenye ebalulekileyo yebali.
3.4 indawo yethutyana encinci
3.5 Zingahlelwa ngokweentlobo ezahlukeneyo zoncwadi.
3.6 Ukuziphatha kunye neemfundiso
3.7 Injongo yezicatshulwa ezibalisayo
3.8 Iintlobo ezimbini zesakhiwo
3.9 Ukusetyenziswa kwezenzi
Yintoni isicatshulwa esibalisayo
Isicatshulwa esibalisayo sinokusichaza njenge ibali apho uthotho lweziganeko kunye nezenzo zibaliswa ngendlela elandelelanayo, oko kukuthi, ukubalisa ibali ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni. Oko akuthethi ukuba akuphelelanga kwindawo ethile kunye nexesha, kusenokuba njalo.
Ngokubanzi, ibali lokwenyani okanye eliyintsomi libaliswa apho abalinganiswa, iindawo, izenzo, iimvakalelo zenziwa ngokutsha...
Undoqo wokuqwalasela isicatshulwa esibalisayo asinguye wumbi ngaphandle kwalowo unxulumanisa iziganeko ezenzekayo ngendlela yokuba kube nokwahlula phakathi kwesiqalo sebali, iqhina (ingxaki, inqaku elibalulekileyo, njl.njl.) kunye nesiphumo.
Sisiphi isakhiwo esilandelayo
Into yokugqibela esikhe saphawula ngayo kwinqaku elingaphambili kukuba isicatshulwa esibalisayo siphawulwa ngokuba nesiqalo, isiqu kunye nesiphelo. Kwaye inyaniso kukuba isakhiwo esilandelwa zizo zonke iitekisi ezibalisayo yile:
Qala: sinokuyibona njengokunikezelwa kwebali, labalinganiswa. Umfundi ubekwe ngexesha kunye nendawo, ngelixa abalinganiswa kunye nomxholo wabo baziswa ukubanika umbono wendlela abakuyo ngalo mzuzu.
Inqaku: kukukhula kwebali, kwaye yeyona ndawo inde kwisicatshulwa kuba kulapho kwenzeka uthotho lweziganeko ezidala iingxaki okanye iimpixano ezithi abalinganiswa bajongane nazo baphume kuzo ngempumelelo.
Isiphumo: Ngaba uyazikhumbula iingxabano? Ewe, kule nxalenye kulapho iingxaki zisonjululwa khona. Ngokuqinisekileyo, kufuneka uhlukanise phakathi kweengxaki ezincinci kunye "nengxaki enkulu, okanye ingxaki ephakathi." Abantwana banokuba baninzi kwaye basonjululwe kulo lonke ibali, kodwa kufuneka kubekho "ingxaki enkulu" eyona nto isonjululwe kwisiphumo, okanye ishiywe ivulekile ukuba kukho ukuqhubeka.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi iimpawu zesicatshulwa esibalisayo? Siza kuxubusha ngezantsi.
Zonke Izicatshulwa ezibalisayo zinomlinganiswa onguyena ophethe ilizwi, ebalisa ibali. Oku akunyanzelekanga ukuba ibe ngumntu wesithathu kodwa omnye wabalinganiswa unokusebenza njengombalisi.
Umzekelo, usenokuba ngumlinganiswa oyintloko, ingqina (elidla ngokuba ngumlinganiswa wesibini) okanye umbalisi owazi konke, oko kukuthi, akathabathi nxaxheba njengomlinganiswa ebalini kodwa wazi yonke into eyenzekayo.
Abalinganiswa yinxalenye ebalulekileyo yebali.
Akunjalo kuphela, kodwa ngabo abaya enza izenzo ezahlukeneyo ezithatha umfundi ukusuka ekuqaleni ukuya phakathi kwaye ukusuka apho ukuya ekupheleni.
Ngoku, sizakubanabo bobabini abalinganiswa abaphambili kunye nabesibini, abakumgangatho ophezulu... Ngokwenyani, akukho mda kwinani labalinganiswa.
Enye yeempawu zezicatshulwa ezibalisayo, ngaphandle kwamathandabuzo, kukuba zikhona Iinkcazo ezininzi kwisicatshulwa. Enyanisweni, zibalulekile kuba kufuneka uphuhlise imeko kunye noko umntu ngamnye ahlangabezana nakho.
Kwelinye icala, kufuneka ubeke umfundi apho akhoyo. Kwelinye icala, kufuneka umxelele nganye yeentshukumo ezenziwa ngulo mlinganiswa ukuze akwazi ukucinga aze acinge engqondweni yakhe ngalinye lamanyathelo aza kuwathabatha.
indawo yethutyana encinci
Ukongeza koku kungasentla, kufuneka kuqatshelwe ukuba iziganeko azinakubaliswa ngendlela engadityaniswanga. Oko kukuthi, kufuneka kubekho unxulumano phakathi kwazo kunye nokulandelelana kwazo.
Umzekelo, asinakuqala ukubalisa isiganeko ngeKrisimesi size sithethe ngeHalloween (ngaphandle kokuba kucacisiwe ukuba ixesha lidlulile). Okanye asikwazi ukuthetha ngendlela abamfumene ngayo umlinganiswa xa engekafiki kuloo ndlu.
Zingahlelwa ngokweentlobo ezahlukeneyo zoncwadi.
Kwaye kukuba izicatshulwa ezibalisayo zinokubakho bhala kwiindidi ezahlukeneyo. Kwanombhalo ofanayo unokuqulunqa iindidi ezahlukeneyo. Ke ngoko, ngaphakathi koku, sinokwahlula phakathi kwamabali, iinoveli, i-biography...
Ukuziphatha kunye neemfundiso
Nangona ingenzeki kuzo zonke izicatshulwa ezibalisayo, kukho ezinye zazo ezinokushiya oko ukufundisa, ukucinga ukuze abafundi bacinge ngoko bakufundileyo baze bakusebenzise kusuku lwabo nosuku.
Injongo yezicatshulwa ezibalisayo
Njengoko izicatshulwa ezibalisayo zichazwa, injongo yazo kukubalisa, ukubalisa amabali ukonwabisa, ukuhlekisa...
Ngamanye amagama, Zingamabali afuna injongo yokugqibela, enokuthi ihlelwe njengolwazi, ukuzonwabisa, ukuzazi ...
Iintlobo ezimbini zesakhiwo
Emva koko sikuxelele kona, izicatshulwa ezibalisayo zineentlobo ezimbini zezakhiwo:
Ngaphandle: apho ihlelwe ngezahluko, iinxalenye, njl. Oko kukuthi, sithetha ngemiba enxulumene nesihloko, intshayelelo, isandulela, izahluko, njl.
Ngaphakathi: ezinxulumene neziganeko ezenzeka embalini. Apha ingenzeka ngolandelelwano lwamaxesha, ngokulandelelanayo, ngolandelelwano lwamva... Apha singenza isakhelo umxholo, intshukumo, ixesha, indawo okanye imiba eyinxalenye yembali yesicatshulwa.
Xa kubhalwa izicatshulwa ezibalisayo, izenzi zidla ngokusetyenziswa kwizihlanganisi ezahlukeneyo, kodwa ezithathu kuzo zigqame ngaphezu kwazo zonke: ixesha eladlulayo elingenammiselo, elangoku nelidluleyo alifezekanga.
Ngamanye amazwi, ibali lidla ngokubaliswa nokuba kungoku nje (okwenzeka kwangolo suku lunye) okanye kwixesha elidlulileyo. Uninzi lukhetha olu khetho kuba lushiya inkululeko encinci kwaye lenza ukuba ibali lilingane kwindawo-ixesha elidlulileyo okanye elizayo.
Ngoku ekubeni usazi ngakumbi malunga nokuba zeziphi iimpawu zesicatshulwa esibalisayo, ngumcimbi wokuhla emsebenzini ukuze wenze eyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iimpawu zesicatshulwa esibalisayo
Usuku lokuzalwa lukaJo Nesbø: abafundi kunye neencwadi abazithandayo kunye namaxesha